IPhone Yangu Haizotamba Voicemails! Iyo Kugadzirisa! [Verizon, AT & T, & T-Nhare] - Iphone
iphone 7 skrini yakasviba
iphone isiri kuchaja ku100
nei yangu iphone 6s ichiramba ichitangazve
chii chinonzi iphone recovery mode zvinoreva
Yangu iPhone Haizotamba Voicemails! Heino Iyo Chaiyo Gadziriso yeVerizon, AT&T, & T-Mobile.
Voicemail haisi kushanda pane yako iPhone uye iwe hauzive zvekuita. Zvinoshungurudza zvisingaite kana voicemail isingashande, kunyanya kana wanga uchitarisira runhare rwakakosha kubva kushamwari kana nhengo yemhuri. Muchikamu chino, Ini ndinokuratidza zvekuita kana yako iPhone isingatambe macoicemails kuti ugone kugadzirisa dambudziko zvachose.
Chii Chakaipa Ne iPhone Yangu? Ndinofanira Kufonera Anotakura?
Panguva ino, hatigone kunyatsoziva kuti nei yako iPhone isingatambe macoicemails. Ivoicemail yaunotamba muFoni app pane yako iPhone inonzi Kuona Voicemail , iyo inotora mazwi ako eemailemail kubva kumutakuri wako muchimiro chemafaira madiki ekuteerera, akafanana nemafaira emimhanzi aunoteerera mukati meMusic app.
Kana voicemail isiri kushanda pane yako iPhone, vanhu vazhinji vanofungidzira kuti pane dambudziko neyavanotakura isina waya, saka vanobva vafonera Verizon, AT & T, T-Mobile, kana imwe nhare yekutsigira yevatengi. Nekudaro, yakawanda nguva iyo dambudziko iri chaizvo inokonzerwa nesoftware nyaya pane iyo iPhone pachayo.
Voicemail Isiri Kushanda Pane iPhone? Heino Chikonzero
Pane zvikonzero zviviri zvakakosha nei yako iPhone isiri kutamba voicemails:
sei usingashandise YouTube kushanda pane yangu iphone
IPhone yako haisi kutora voicemails kubva kune yako isina waya inotakura kana
Iyo App yefoni pane yako iPhone haisi kushanda nemazvo
Yedu gadziriso yekutungamira ichakubatsira iwe kuongorora uye kugadzirisa iyo chikonzero nei voicemail isiri kushanda pane yako iPhone!
Tisati tapinda mumatanho ekugadzirisa matambudziko, ita shuwa kuti une Visual Voicemail yakamisikidzwa pane yako iPhone. Vhura iyo App yefoni pane yako iPhone uye tora Voicemail mukona yepazasi-kurudyi kwekona. Kana iwe ukaona 'Kuti utore voicemail tanga waseta password nekukwazisa' pachiratidziri pamwe nebhatani rinoti Set Up Now , ipapo Visual Voicemail haina kumisikidzwa pane yako iPhone.
Kuti umise Visual Voicemail, tinya Set Up Now . Iwe unozokurudzirwa kupinda uye kusimbisa voicemail password. Tevere, iwe unenge uine sarudzo yekusarudza default voicemail kukwazisa kana kurekodha yako wega. Kana iwe uchida kurekodha yako wega tsika kwaziso, tinya Tsika . Paunenge iwe wapinda wakagadzira password yako uye ukasarudza kukwazisa kwako, iwe unozokwanisa kugamuchira voicemails uye wovaona muPhone app.
Pro tip: Unogona kutarisa kaviri kuti uone kana voicemail yakamisikidzwa pane yako iPhone nekufona nekufonera yako wega nhamba yefoni muKiipad yeApple app, kana kufonera yako iPhone uchishandisa imwe foni.
Nei iPhone Yako Isingatambe Voicemails - Iyo Kugadzirisa!
Vhara Uvhure zvakare Iyo App Yefoni
Sezvandambotaura, chimwe chezvikonzero zvakajairika nei iPhone isinga ridze voicemails imhaka yekuti iyo App yeApponi isiri kushanda nemazvo. Kuvhara uye kuvhurazve iyo App yefoni inobvumira iyo 'kuvhara' uye kutanga zvakare, izvo dzimwe nguva zvinogona kugadzirisa software glitch.
iphone 5 voicemail isiri kushanda
Kuti uvhare iyo App yefoni, tanga na kutsikirira kaviri bhatani repamba. Izvi zvichavhura iyo App Switcher, iyo icharatidza ese maapplication iwe auri kuvhura pane yako iPhone. Shandisa munwe wako kuti usvetuke kumusoro paPhone app. Iwe uchaziva kuti iyo App yeFoni yakavharwa kana isisacharatidzike muApp Switcher.
Dzimwe nguva, kupa yako iPhone kutanga nyowani nekuidzima uye kudzoka zvakare kunogona kugadzirisa diki software nyaya. Semuenzaniso, kana iyo software ye iPhone yako ikabondera kumashure, zvinogona kunge zvakakonzera iyo Foni app kutadza kushanda.
Kudzima yako iPhone, dzvanya uye bata iyo bhatani remagetsi kusvikira iwe waona iyo tsvuku yemagetsi icon uye slide kumagetsi kudzima kuoneka pane kuratidzwa kwe iPhone yako. Uchishandisa munwe wako, tsvedza iyo tsvuku simba icon kubva kuruboshwe kuenda kurudyi. Mirira anenge masekondi makumi matatu usati wadzosera yako iPhone kumashure, kungoita shuwa kuti inodzima zvachose.
Pinda MuAkaundi Yako Inotakurika Yekutakura Uye Chinja Yako Voicemail password
Vamwe vatakuri vanoda kuti iwe udzore zvakare voicemail password seyambiro yekuchengetedza kana iwe wawana iyo nyowani iPhone. Dzimwe nguva, kuimutsiridza manyore online kana kufonera vatengi rutsigiro kunogona kumisikidza yako iPhone kubatana kweye voicemail server uye kugadzirisa dambudziko.
Asi Ini Ndakafunga iPhone Voicemail Yakanga Isina A password!
Yako iPhone ine voicemail password, asi iwe unofanirwa kungoipinda kamwe chete uye mazhinji maPhones matsva anoimisa otomatiki. Nekudaro, pachiri kuda kuve neimwe nzira yekusimbisa pakati peanokutakura uye yako iPhone kudhawunirodha mavoemaemail. Kunyangwe iwe usingaone, yako voicemail password ichiripo.
Maitiro Ekuti Uchinje Yako Voicemail password Kana Verizon Ndiye Anokutakura
Unogona kushandura voicemail password kubva ku iPhone yako nekufona (800) -922-0204 . Iwe uchasvika kune yega otomatiki sevhisi yemenu menyu iyo inokutendera iwe kuti uchinje yako voicemail password. Kuti udzidze zvakawanda, tarisa Verizon's chinyorwa chekutsigira pamusoro wenyaya.
Maitiro Ekuti Uchinje Yako Voicemail password Kana AT&T Ndiye Anokutakura
Unogona kushandura voicemail password nekufona (800) -331-0500 kubva ku iPhone yako. Iwe uchasvika AT & T's automated customer service menyu iyo inokumbira yako nhamba yefoni uye yekubhadhara zip kodhi. Masekonzi mashoma gare gare, meseji 'password haina kukodzera - Pinda Voicemail password' ichaonekwa pakuratidzwa kweiyo iPhone yako. Pinda manhamba ekupedzisira manomwe efoni yako kuti ushandure password yako yevoicemail. Ini ndinokurudzira zvakasimba kuti iwe uverenge AT & T's voicemail chinyorwa chekutsigira kudzidza zvakawanda!
Paunogadzirisazve maratidziro enetiweki, ese ako maWi-Fi uye maseru network emagetsi anozobviswa Izvi zvinosanganisira marongero ako eVirtual Private Network (VPN), zvishandiso zvako zveBluetooth, uye netiweki dzako dzeWi-Fi - saka ita shuwa kuti unonyora pasi mapassword ako kutanga!Isu tinoita iyi nhanho nekuti zvinogona kuve zvakaoma kwazvo kuteedzera chaiyo sosi yedambudziko re software, saka tinogadzirisazve zvese marongero enetiweki.
Kuti Ugadzirise Network Zvirongwa, tanga nekuvhura iyo Zvirongwa app. Tevere, tinya General -> Seta -> Gadziridza Network Zvirongwa uye nyora pasipoti yako. Your iPhone achaita itangezve network marongero uye restart pacharo.
Voicemail Dambudziko: Yakagadziriswa!
Iwe wakagadzirisa dambudziko ne iPhone yako uye ikozvino wave kugona kuteerera kune ako voicemails zvakare! Ita shuwa kuti shamwari dzako nemhuri vanoziva zvekuita kana maPhones avo asingatambe macoicemails nekugovana ichi chinyorwa pasocial media. Kutenda nekuverenga, uye unzwe wakasununguka kusiya komendi pasi pazasi kana uine chero mimwe mibvunzo nezve yako iPhone.